xisbiga kulmiye oo ku fashilmay magacaabistii xubnaha kaambaynka ee gobolka saraar WQ-Aqoonyahan Faysal Diiriye. | Haqabtire News
xisbiga kulmiye oo ku fashilmay magacaabistii xubnaha kaambaynka ee gobolka saraar. waxaa ka hadhay waqtigii kaambaynku bilaabmayey 2 casho sidaas oo ay tahay wuxuu xisbigu ku fashilmay inuu wax olole kaambayn ah ka dhaqaajiyo gobolka saraar (caynabo) iyo degmooyinkiisa yaa ka masuul ah arintaas waxaan soo qaadanaynaa dhawr arimood oo loo aanaynayo sababta.
1.wasiiro si khalad ah kulmiye hore u mulkisiiyey awooda gobolka oo saami khaldan ka raba iminkana aan rajo wanaagsan ka qaban wasiirnimadooda haddii kulmiye soo noqdo haddii kalena daaba.
2. baadi kugu raagtay yedaa baad moodaa oo ah in reer qudhi wada qaato maamulkii kulmiye dawlada iyo wixii soo baxaba markii dadkii kale arkayna la yaaban oo u qaadanla in cid kaloo hanlihibs timaado.
3. karti daro hogaanla sare ee xisbiga ah oouu qiimayn kari waayey dad codla doonaya oo aan cidiba dan kalahayn taasoo ka bilaabmaysa xubnaha sare ee beesha habarjeclo u metala xisbiga oo garan kari waayey doorkoodii masuuliysdeed iyo kala hagaajinta reerkooda gabayna shaqadii ay lahaayeen taasoo kuu cadaynaysa inaanay xisbina wax u tarayn haday tii reerkoodaba .
Gudoomiyaha xisbiga oo aan kals ogaynba halkay wax u marayaan ba iyo waxa ks khaldan ama u saxan iyo masuuliyadiisa gobolada mise codka dadkaad ayaan kulmiye rabin isku soo duuboo bal kataliya arinta axada xisbigii ololaha u leeyahay aan gobolkaas oo dhan guri laga kirayn gudiyo tuulo laga samayn waxba loo sheegin cidi aanay u tegin .